Mid kamid ah Dowladaha Afrika ugu awooda badan oo ah Koonfur Afrika ayaa isaga baxeysa ICC – Xeernews24
Mid kamid ah Dowladaha Afrika ugu awooda badan oo ah Koonfur Afrika ayaa isaga baxeysa ICC
Dowlada Koonfur Afrika ayaa wada qorshe ay ku dooneyso in ay uga baxdo kasii mid ahaanshaha Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC)ee fadhigeedu yahay magaalada Higue ee dalka Holland talaabaas oo ah mid ayaad uga farxisay Al Bashirka dalka Suudaan.
Warbaahinta dalka Koonfur Afrika oo helay xogo muhiim ah ayaa baahinaya in Dowlada Koonfur Afrika ay dooneyso in ay ka baxdo Maxkamadda Caalamiga ee ICC, waxa ayna Koonfur Afrika ku eedeesay Maxkamada in dhinac u u xaglisa oo cadaalad aheyn.
Diblomaasiyiin sar sare oo u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in u wargeliyeen Qaramada Midoobay tallaabadan ay qaadayaan , waxaanay ku eedeeyeen Maxkamadda ICC-da in ay ka xagliso dalalka Afrika.
Warbaahinta dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in ay heleen Nuqulo muhiim ah oo ku aadan qorshaha Koonfur Afrika ku dooneyso in ay uga baxdo Maxkamadda ICC, walina madaxda dalkaasi kama aysan hadlin qorshahan ay uga baxayaan Maxkamada Caalamiga ee ICC.
„Dowlada Koonfur Afrika waxay garawsatay in xilka ay iska saarto sidii si nabdoon xal loogu heli lahaa colaadaha jiraa aanay mararka qaarkood is waafaqayn fasiraadda sharci ee Maxkamadda Dembiyada Caalamiga“ ayaa lagu sheegay qoraalka Koonfur Afrika gudbisay.
Dalka Koonfur Afrika Sannadkii hore iska diidday in ay xirto ayna u gudbiso Maxkamadda Caalamiga Madaxweynaha Sudan, Cumar Al-Bashiir, oo ka qayb galayay shir-madaxeedkii Midowga Afrika oo ka socday magaalada Johannesburg.
Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ICC ayaa inta badan lagu eedeeyaa in aysan dhax dhaxaad aysan aheyn , ayna inta badan ku xadgudubto madaxda iyo Siyasaiyiinta Qaarada Afrika halka Wadamada kale Yurub aysan sidaa u faro galin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/Al-Bashir.jpg 167 302 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-21 15:50:432016-10-21 15:51:26Mid kamid ah Dowladaha Afrika ugu awooda badan oo ah Koonfur Afrika ayaa isaga baxeysa ICC
Qeybta 2aad Warbixin ka hadlaysa weerarada Maraykanka uu qarsoodiga uga fuliyo... Shir ka dhacay magaaladi Biki oo noqotay degma cusub oo magac Bixin ku Haboon...